Dispenser afovoan'ny vera 16oz miaraka amin'ny orinasa Silicone Funnel sy mpamatsy | Hoyer
16oz Glass savony Dispenser miaraka amin'ny Silicone Funnel
Haingo an-trano tsara tarehy: famolavolana tavoahangy, haing-penitra avo lenta tsara, famolavolana tsara sy skid-porofo. Azo ampiasaina hihazona savony izy io, saniterer, tanana disinfectant, sns. Ny mpanamory ny savony dia misy kozika silicone izay mahafoana menaka tsara. Mety amin'ny lakozia an-dakozia, fanadiovana tànana, fandroana vatana. Mety amin'ny tranonao, birao, hotely, trano fisakafoanana, sns.
savaivony: 76mm / 3 santimetatra
MOQ: 20,000pcs, latsaky ny habeny azo ekena koa raha manana tahiry isika
Kalitao avo lenta sy azo antoka: ny harafesina misakana ny mpanamory savony dia manamboatra paompy vy vita amin'ny 304, ny faritra plastika amin'ny savony dia manamboatra plastika misy sakafo, tsy misy BPA.
Raha tsy tianao loatra ilay dispenser misy savony dia azafady mba mifandraisa aminay avy hatrany. Ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa 100% dia ny fanaovana fanompoana mandritra ny androm-piainana.
Ity dispenser sabera ity dia tsara ho an'ny fianakavianareo na ho an'ny fanomezana ho an'ny fianakaviana, fanomezana amin'ny fetin'ny reny, fampakaram-bady, fanomezana fety.
Mety ho an'ny lotion fandroana an-dakozia, mpanasa an-dakozia, shampoo, lotion, sns. Ireo mpanamory ny savony dia misy fatana silicone izay mahatonga lafarinina tsara.
Ny fantsom-baravarankely am-bava fitaterana fantsona azo vita amin'ny vy vy 18/8 304. Ny ampahany amin'ny plastika misy ny savony dia plastika vita amin'ny sakafo, BPA-FREE.
Size Boky: 455 ml Haavony: 190 mm Diameter: 76 mm Boky: 16 oz H: 7,5 santimetatra D: 3 santimetatra
Color Taratra mazava ny fanontana na ny loko namboarina dia azo ekena ihany koa
Previous: Kobalt manga 16 oz Boston boribory boribory ary manosika voatavo voatavo voatavo ambony
Manaraka: 16 Dispenser savony amin'ny tavoahangy vera miaraka amin'ny baomba Nickel nopotehina
paompy tavoahangy loto
mpamatsy tavoahangy lotion
tavoahangy feno tavoahangy
Vidiny kalitao 30ml 1oz Amber Glass ilaina ...